Ny lafiny manan-danja amin'ny mpivarotra rehetra dia fitaterana. Ary tsy resaka fitaovam-pitaterana izay hahatongavana any amin'ity firenena ity na ity firenena ity. Raha ny zava-misy, raha te ho any amin'ny tanàna iray ianao ary tsy mahita mpivady maro hafa mahaliana ny manodidina dia farafaharatsiny. Noho izany dia ilaina ny mieritreritra ny lalana sy ny fomba hanodinana azy ireo mialoha.
Ny lafiny manan-danja amin'ny mpivarotra rehetra dia fitaterana. Ary tsy resaka fitaovam-pitaterana izay hahatongavana any amin'ity firenena ity na ity firenena ity. Raha ny zava-misy, raha te ho any amin'ny tanàna iray ianao ary tsy mahita mpivady maro hafa mahaliana ny manodidina dia farafaharatsiny. Noho izany dia ilaina ny mieritreritra ny lalana sy ny fomba hanodinana azy ireo mialoha. Ary raha i Kolombià no tanjona manaraka ho an'ny toerana misy anao, dia fotoana izao hahafantarana ny fitaterana eto amin'ity firenena ity.
Back in the early 1990s. Afaka mirehareha amin'ny rafi-dalan'ny lalamby manerana an'i Amerika Atsimo i Kolombia. Na dia izany aza, nanapa-kevitra ny governemanta fa ny toe-javatra toy izany dia tsy mitondra ny vola miditra sahaza, ary nanatontosa ny fizarana ny lalamby. Vokatr'izany, fanitsakitsahana tanteraka ny entana sy ny fifamoivoizana.
Na dia izany aza, mbola azo atao ny mitaingina fiaran-dalamby any Kolombia. Ny tsenan'ny mpizaha tany Bogota -Kaikka, 60 km ny lavaka, angamba no hany fizarana amin'ilay lalamby mbola miasa.
Any Kolombia dia misy seranam-piaramanidina maherin'ny 1100, ny 13 amin'ireo dia manompo sidina iraisam-pirenena. Ny ankamaroan'ny fifamoivoizana dia misarika ny seranam-piaramanidin'i Bogotá, Kali , Medellín ary Barranquilla .
Ny halavan'ny lalana any Kolombia dia maherin'ny 100.000 km. Tsy ny rehetra no ao anatin'ny toe-javatra tsara, fa ireo lalan'ny mpizahantany malaza kosa dia napetraka araka ny filaharany. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina amim-pahatokisana fa ny fiara fitateram-bus no tena fomba fitaterana an'habakabaka any Kolombia.
Any amin'ireo tanàna, ny Kolombiana dia mandroso indrindra amin'ny bus and taxis. Saingy misy tranga maro mahaliana izay mendrika manokana:
Rafitra bus an'ny Bogota. Hatramin'ny efa nihoatra ny marika 7 tapitrisa ny mponina ao Bogota, manontany tena ny manampahefana ny tambajotra mahomby amin'ny fitateram-bahoaka. Ohatra, nanapa-kevitra ny handray ny tanànan'i Curitiba Breziliana. BRT, antsoina hoe Bus Rapid Transit dia rafitra haingam-pitaterana haingam-pandeha mivezivezy eny amin'ny lalambe voatokana, manana tombony amin'ny fifamoivoizana, ary mpandeha 18 000 isaky ny ora ny dia. Ity karazana fandaminana ny fitateram-bahoaka ao Bogota antsoina hoe TransMilenio. Androany, ity rafitra ity dia manana andalana 11, ny totaliny dia 87 km, ary misy toerana 87 sy bisy 1500 ahitana olona 160 ka hatramin'ny 270.
Ny metropolitanan'i Medellin. Io no tanàna faharoa be mponina indrindra any Kolombia ary ny hany tokana ahafahan'ny tambajotra fitateram-bahoaka miseho amin'ny alalan'ny fiara fitaterana, fa koa amin'ny metro. Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny taona 1985 ary ny ankamaroany dia mandalo ny velarana. Medellin metropole dia manana andalana 2 miaraka amin'ny 34.5 kilometatra iray manontolo, saingy efa voasoratra ao amin'ny masoivohony amin'izao fotoana izao fa ny metro madio indrindra. Mahaliana fa ity karazana fitateram-bahoaka ity dia tafiditra ao anatin'ny fiarandalamby mivezivezy any Metrocable, izay mandalo ny tranon'omby.
Bolivia - zava-misy mahaliana
Ahoana ny fomba hanamboarana pastèque?
Tubootitis amin'ny ankizy
Sary iraisana ho an'ireo alika avy amin'ny tovovavy chihuahua
Skirts semi-sun 2014
Tonga tany Kanada ny Prince William sy Kate Middleton niaraka tamin'ny ankizy
Tom Ford Punkte
Andro iraisam-pirenena ho an'ny olon-dehibe
Ahoana no iomanan'i Gal Gadot ny anjara asan'ny vehivavy Wonder ao amin'ny Ligin'ny Fitsarana?
Ahoana no tsy tokony hatahorana ny fiara - toro-hevitra amin'ny psikology
Lapan'ny San Anton
Inona no fihinan'ny menarana?
Sampana amin'ny tanana manokana
Fetiben'ny kiraro 2014
Mandarin Liqueur ao an-trano
Garter ny ampakarina
Ny mikrôba amin'ny urine - ny fenitra na ny patolojia?
Inona no hitranga any Kazan amin'ny 2 andro?
Ahoana no tsy tokony hiainana?
Chlorhexidine amin'ny akne ho an'ny tarehy - ny endri-javatra rehetra amin'ny fampiharana